Argagixisihii Labaaad ee Somaali ah oo deganaan jiray Sweden. | Warfaafiye	Home
Saturday, August 11th, 2012 | Posted by admin Argagixisihii Labaaad ee Somaali ah oo deganaan jiray Sweden.
Saxaafada Wadanka Sweden ayaa baryahaan waxaay bogga hore ee Jaraaidada ugu waa weyn ku soo qoreen Argagixiyihii labaad oo degenaa Sweden. Ninkaan ay ku soo bandhigeen bogga hore ee shabakadaha aadka loo aqriyo ee Aftonbladet & Expressen waxay kaga Sheekh Muumin oo ay ku tilmaameen Argagixiso markiisii hore 90-maadkii soo galay wadanka Sweden isagoo magangalyo doon ah.
Sheekh Cabduqaadir Muumin oo haatan ka mid ah mas’uuliyiinta Xarakada Alshabaab, lana arkay waqtiyo badan asagoo hadalo ka dhan ah Reer-galbeedkana ka sheegaya saxaafada ayaa waxa uu magangalyo ku tagay Sweden 90-maadkii xilligaas oo Soomaaliya ay ka taagnayd dagaal-beeleedyo & kuwo sokeeye.
Ma aha Cabduqaadir Muumin keliya ragga ugu culculus xarakada Al-Shabaab ee Sweden ku noolaa ee Fuaad Moxamed Qalaf Shongole ayaa isna degenaa Sweden taasoo booliska uu sheegay inuu lacago kala baxsaday wadanka Sweden inta uusan Alshabaab ku biirin.
Waaxda ammaanka ee Dowlada Britain ayaa dabagal iyo caddaadis ku saartay Cabduqaadir Muumin taasoo sabab u ahayd inuu u laabto Soomaaliya. Waxaa bilowgii 2011kii la arkay mar kale isaga oo ka mid ah Xarakada Alshabaab, xilligaas kadib waxa uu si toos ah kaga mid noqday xubnaha firfircoon ee Alshabaab.
Waxaa warbaahinta ay soo bandhigeen Sh Cabdulqaadir Muumin isaga oo carruur Qur’aan aqris ku guuleesatay u qeybinaya qoriga Kalashnikov, Garneelada gacanta, carruur ay u weynaayeen 17 jiro gudaha Magaalada Muqdisho.
Waxaan ilaa hadda la ogayn halka uu ku dambeeyo mas’uulkaan isagoo inta ay Shabaab ka bixin Afgooye ku sugnaa deegaanadaasi.